စိန်နားကပ်ရောင်ကြောင့် ပါးပြောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုး ကျွန်မ မမက်မောဘူး – Shinyoon
စိန်နားကပ်ရောင်ကြောင့် ပါးပြောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုး ကျွန်မ မမက်မောဘူး
November 7, 2020 by Shin Yoon
ကျွန်မ ဘယ်သူ့ရဲ့ မိန်းမပါ ဘယ်ဝါရဲ့မိန်းမပါဆိုတဲ့ ဂုဏ်ကို မလိုချင်ဘူး တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့တွေ့လို့ နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ ကျွန်မက ဘယ်သူပါဆိုတဲ့ ဂုဏ်လေးပဲလိုချင်တယ်
စိန်နားကပ်ရောင်ကြောင့် ပါးပြောင်ရတဲ့အဖြစ်မျိုး ကျွန်မ မမက်မောဘူး ။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ အရောင်တွေလက်နေချင်တယ် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲ တန်ဖိုးတက်ချင်တယ် ဘယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်ကြောင့်မှ ကိုယ့်တန်ဖိုးတွေ ကျလဲမသွားချင်သလို တက်လဲ မတက်ချင်ဘူး ဒါကျွန်မထားတဲ့ မာနပါ . . .
အသားလွတ်ကြီး မာနတွေတက်နေတာလို့ လူတွေက ပြောကြဆိုကြလိမ့်မယ် ရပါတယ် ဒါပေမယ့် မာနတော့ မချပါရစေနဲ့ ကျွန်မမှာ ဘာမှ ရေရေရာရာပြစရာမရှိဘူး ဒီမာနလေးနဲ့ပဲ အရာရာကို တင်းခံထားတာပါ
ဗိုလ်ကတော် ဖြစ်မှ ဆရာ၀န်ကတော်ဖြစ်မှ ဆိုတဲ့ အိပ်မက်တွေ ဘယ်တုန်းကမှ မမက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ငွေရှိမှ သိပ်ပြီးချမ်းသာမှ အိမ်ထောင်ဖက်ရွေးမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးခဲ့ဘူး နဖူးစာမပါလို့ တစ်ယောက်တည်း အရိုးထုတ်ရရင်တောင် ကျွန်မ တစ်ယောက်တည်း ရပ်တည်နိုင်ဖို့ပဲ ကြိုးစားတယ်
မိန်းမသားဆိုတာ အားကိုးလိုစိတ်တော့ အနည်း နဲ့ အများရှိတတ်ကြတယ်တဲ့ အဲ့ဒီအားကိုးလိုတဲ့စိတ်ကို အတတ်နိုင်ဆုံး ဖျောက်ချထားခဲ့တာပါ ဘယ်သူ့ ပုခုံးမှ မလိုအပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နေဖို့အတွက်ပဲ တွေးဖြစ်ခဲ့တာပါ
သူများ နှာခေါင်းပေါက်နဲ့ အသက်ရှုရတဲ့ အဖြစ်မျိုး ကျွန်မ မလိုလားဘူး ကိုယ်ယုံကြည်ရာလမ်းကို ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်အတိုင်းပဲ လျှောက်လမ်းချင်တယ် လက်တွဲဖော် ရှိလာခဲ့ရင်တောင် အနည်းတော့ ကိုယ့်ခံယူချက်တွေကို နားလည်ပေးနိုင်တဲ့ လူမျိုးပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်
လူတွေကြားရောက်တဲ့အခါ ကျွန်မက ဘယ်သူ့ရဲ့ မိန်းမပါဆိုပြီး မိတ်ဆက်စကားတွေ ပြောနေရတာထက် ကျွန်မက ဘယ်သူပါ ဘယ်ဝါပါဆိုပြီးပဲ လိပ်ပြာသန့်သန့် မိတ်ဆက်ချင်တယ် ဒါ ကျွန်မရဲ့ ခံယူချက်သက်သက် ပါ မိန်းကလေးတိုင်းနဲ့ တူချင်မှ တူလိမ့်မယ်
မာနကြီးလိုက်တာဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်တွေ ခေါင်းမာလိုက်တာဆိုတဲ့ ခေါင်းစဥ်တွေ ကြိုက်ရာ ခေါင်းစဥ်ကို တပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလို ကျွန်မမှာလဲ ကျွန်မရဲ့ ခံယူချက်အတိုင်း ဆက်ပြီးလျှောက်နေဖို့ အခွင့်အရေးတွေ ရှိပါတယ် ကျွန်မက မိန်းမသားပါ သို့သော် မှီခိုစရာ ပုခုံးတစ်ဖက်ကို လိုက်ရှာနေဖို့ထက် ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်ဖို့ တွေးတတ်တဲ့ မိန်းမသားပေါ့ ။
ကြၽန္မ ဘယ္သူ႔ရဲ႕ မိန္းမပါ ဘယ္ဝါရဲ႕မိန္းမပါဆိုတဲ့ ဂုဏ္ကို မလိုခ်င္ဘူး တစ္စုံတစ္ေယာက္နဲ႔ေတြ႕လို႔ ႏႈတ္ဆက္တဲ့အခါ ကြၽန္မက ဘယ္သူပါဆိုတဲ့ ဂုဏ္ေလးပဲလိုခ်င္တယ္
စိန္နားကပ္ေရာင္ေၾကာင့္ ပါးေျပာင္ရတဲ့အျဖစ္မ်ိဳး ကြၽန္မ မမက္ေမာဘူး ။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲ အေရာင္ေတြလက္ေနခ်င္တယ္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပဲ တန္ဖိုးတက္ခ်င္တယ္ ဘယ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေၾကာင့္မွ ကိုယ့္တန္ဖိုးေတြ က်လဲမသြားခ်င္သလို တက္လဲ မတက္ခ်င္ဘူး ဒါကြၽန္မထားတဲ့ မာနပါ . . .
အသားလြတ္ႀကီး မာနေတြတက္ေနတာလို႔ လူေတြက ေျပာၾကဆိုၾကလိမ့္မယ္ ရပါတယ္ ဒါေပမယ့္ မာနေတာ့ မခ်ပါရေစနဲ႔ ကြၽန္မမွာ ဘာမွ ေရေရရာရာျပစရာမရွိဘူး ဒီမာနေလးနဲ႔ပဲ အရာရာကို တင္းခံထားတာပါ
ဗိုလ္ကေတာ္ ျဖစ္မွ ဆရာ၀န္ကေတာ္ျဖစ္မွ ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ေတြ ဘယ္တုန္းကမွ မမက္ျဖစ္ခဲ့ဘူး ေငြရွိမွ သိပ္ၿပီးခ်မ္းသာမွ အိမ္ေထာင္ဖက္ေ႐ြးမယ္လို႔ ဘယ္တုန္းကမွ မေတြးခဲ့ဘူး နဖူးစာမပါလို႔ တစ္ေယာက္တည္း အ႐ိုးထုတ္ရရင္ေတာင္ ကြၽန္မ တစ္ေယာက္တည္း ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ပဲ ႀကိဳးစားတယ္
မိန္းမသားဆိုတာ အားကိုးလိုစိတ္ေတာ့ အနည္း နဲ႔ အမ်ားရွိတတ္ၾကတယ္တဲ့ အဲ့ဒီအားကိုးလိုတဲ့စိတ္ကို အတတ္ႏိုင္ဆုံး ေဖ်ာက္ခ်ထားခဲ့တာပါ ဘယ္သူ႔ ပုခုံးမွ မလိုအပ္ဘူးဆိုတဲ့စိတ္နဲ႔ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္ေနဖို႔အတြက္ပဲ ေတြးျဖစ္ခဲ့တာပါ
သူမ်ား ႏွာေခါင္းေပါက္နဲ႔ အသက္ရႈရတဲ့ အျဖစ္မ်ိဳး ကြၽန္မ မလိုလားဘူး ကိုယ္ယုံၾကည္ရာလမ္းကို ကိုယ့္ယုံၾကည္ခ်က္အတိုင္းပဲ ေလွ်ာက္လမ္းခ်င္တယ္ လက္တြဲေဖာ္ ရွိလာခဲ့ရင္ေတာင္ အနည္းေတာ့ ကိုယ့္ခံယူခ်က္ေတြကို နားလည္ေပးႏိုင္တဲ့ လူမ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္တယ္
လူေတြၾကားေရာက္တဲ့အခါ ကြၽန္မက ဘယ္သူ႔ရဲ႕ မိန္းမပါဆိုၿပီး မိတ္ဆက္စကားေတြ ေျပာေနရတာထက္ ကြၽန္မက ဘယ္သူပါ ဘယ္ဝါပါဆိုၿပီးပဲ လိပ္ျပာသန္႔သန္႔ မိတ္ဆက္ခ်င္တယ္ ဒါ ကြၽန္မရဲ႕ ခံယူခ်က္သက္သက္ ပါ မိန္းကေလးတိုင္းနဲ႔ တူခ်င္မွ တူလိမ့္မယ္
မာနႀကီးလိုက္တာဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြ ေခါင္းမာလိုက္တာဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေတြ ႀကိဳက္ရာ ေခါင္းစဥ္ကို တပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသလို ကြၽန္မမွာလဲ ကြၽန္မရဲ႕ ခံယူခ်က္အတိုင္း ဆက္ၿပီးေလွ်ာက္ေနဖို႔ အခြင့္အေရးေတြ ရွိပါတယ္ ကြၽန္မက မိန္းမသားပါ သို႔ေသာ္ မွီခိုစရာ ပုခုံးတစ္ဖက္ကို လိုက္ရွာေနဖို႔ထက္ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚကိုယ္ရပ္ဖို႔ ေတြးတတ္တဲ့ မိန္းမသားေပါ့ ။
ကိုယ့်ဘ၀ကို ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ဖြတ်သန်းနေတာကလဲ အတတ်ပညာပါပဲ
ပထမလူကိုသာ သိပ်ချစ်ခဲ့ရင် ကျွန်မကို ဒုတိယအနေနဲ့ ချစ်တယ် မပြောခဲ့သင့်ဘူးလေ